आजको राशिफल : शुक्रबार तपाईँका लागि कति फलदायी ? – Upahar Khabar
आजको राशिफल : शुक्रबार तपाईँका लागि कति फलदायी ?
प्रकाशित मिति : ५ असार २०७७, शुक्रबार ०७:१४ June 19, 2020
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) ईमान्दारिता पुर्वक गरीएको प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा आउँने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । अध्ययनमा प्रविधिको प्रयोग गरि पतिस्पर्धीहरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा हात पार्न सकिनेछ । चाहको वस्तु तथा मनोकामनाहरु पूरा हुनाले मन प्रफुल्लीत हुनेछ । तरपनि समय प्रतिकुल रहेकोले सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला । अत्यावस्यक काममा बाहेक यात्रा नगर्नुहोला ।
गण्डकीमा थपिए २४ जना कोरोना संक्रमित (विज्ञप्ति सहित)
सार्वजनिक यातायात संचालनका लागि एकसाता भित्र टुङ्गो लाग्ने